Baaritaan lagu samaynayo baarayaasha luuqada ee Laanta Socdaalka | Somaliska
Ka dib markii uu telefishinka Sweden soo bandhigay fadeexad ku saabsan baarayaasha luuqadaha ee Laanta Socdaalk, ayay hada go’aansadeen in ay baaritaan ku sameeyaan shirkada Sprakab iyo qaasatan mid ka mid ah baarayaasha Afka Soomaaliga oo lagu eedeeyay in uu aqoontiisa been ka sheegay.
Migrationsverket ayaa go’aansatay in baaritaanka ay samayso hay’ada socdaalka ee wadanka Holland taasoo lagu magacaabo INS. Wargeyska Dagens Nyheter ayaa qoray in hay’ada INS ay laftooda ka midyihiin maacaamiisha Sprakab taasoo keenaysa in la dhihi karo in aysan si haboon u baari doonin hawshooda. Ma ahan markii ugu horeysay ee Migrationsverket ay ka dalbato INS in ay baaritaan ku samayso Sprakab iyadoo sanadkii hore baaritaan midkaan la mid ah ay samaysay, iyagoo baaritaan ka dib sheegay in “baaraha luuqada Soomaaliga uu fiicanyahay”.
Byron Törnström oo ka mid ah qareenada caawiya dadka magangalyo doonka ah ayaa ku tilmaamay go’aanka Migrationsverket ay markale ku aamineen INS ay tahay mid lala yaabo.
Fredrik Beijer oo Migrationsverket u qaabilsan arimaha cadaalada ayaa sheegay in ay macquul tahay in INS ay ka midyihiin macaamiisha Sprakab balse uusan doonayn in baaritaanka lagu sameeyo Sweden oo ay sameeyaan shirkadaha kale ee la tartamaya Sprakab.
Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii ay isbuucii hore soo baxday in mid ka mid ha baarayaasha luuqada Af-soomaaliga ee ay isticmaalaan Migrationsverket uu been ka sheegay dad badan isla markaana uu been ka sheegay waxbarashadiisa ayaa la filayaa in taasi ay keento in Migrationsverket ay dib u baarto kiisaska dadkii uu ninkaan wareysiga ku sameeyay oo gaaraya 5000 qof , qaasatan kuwii diidmada la siiyay.
Cudurka HIV-ku sidii shalayto ma aha! Astaamaha iyo daaweynta
Nin lagu xukumay xabsi ka dib gudniin
somalilan ayaga dhahay waxanahay dowlad hadane waxayradinayan khaxootinimo dad ay diidayan ayeesheanayan marke meshan imadan waxa fican in ay iskufilnansameeyan sida aysheganayan aygogiyaan tahriibka madama ay yihin dowlad dhan say moqdisho unecebyihin iyo sida ay ugu dharanayan wale wa wax lalayaabo waxan arkay kuwo madan uradinaya dad usharaha magaloyinkii ay diidayeen war waxa ni heesto wa uqubi somalina ayada aya istaqaan midkas ta meeshukayimid dadka kayimaado slan kamka mar kalajogo lakumasheegikaro somaliya hadane waybaranayan ma bil iyo laba bil aya lagu baran karaa lahjad ay na aqoon haba bartaane magaaladi waxa kacawinaya intarnedka lkn nasiibwanaag luqadii yacaawinaya allaw nasaacid
Jimcale aan ku sexee hayada socdalka ee holland waa IND maaha ins
adigu is xisaabi ma been baad sheegtay mise run? says:
ma aqaano sababta dadka somaliyeed isku xaasidaan waayo waxa jira wadankan dad badan oo ajanabi ah iyagoo is xasdaaya lama arko walee somalida towfiiqdii ayaa ku yaraatay. allow sahal.
Qamar waad qaldantahay 24 ka hor kii yimiday ee ka yimi muqdisho muxuu isku dhiibi jiraybaad u malaynaysaa???. Marba xagay dhibtu ka taagantahaybaa la sheegtaaye anigaa kuu haya dad Hawiye ah oo wadanka Isaaq ku jooga.. Markaa kuma qabsano oo caadibay nala tahaye waxan ku gubay maxaa la yidhaa???. Dadkuna dusha iskuma sitaan hadad aragtay qof qaldan oo wadan dhan caayaya haka daba qaldamine iska dhaaf… Adoon meel kale ka eegin diintii islaamkaa ina walaalaysaye intaas ku qabaw abaayo macaan.
November 21, 2014 at 09:04
Qamar gabadha LA baxday Somaliland horumarka ay gaadhay ma cuqdad ayaa kaa Haysa waadiga Ku barooranayee leh Somalilande ee afku hadalku kaa xaday. Horaa loogu maahmaahay baroortu ceesaanta ka Wayn.
Wax somaliland layidhaahdo ma aqoonsani waxaan maqlay somali diid reer waqooyi
Reer waqooyi sidey somali unecebyihiin ayaan unebchy